Arsenal oo guul ka soo gaartay kooxda Sheffield United oo ay ku booqatay garoonka Bramall Lane… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye April 11, 2021
(England) 11 Abriil 2021. Arsenal ayaa guul muhiim ah ka soo gaartay kooxda Sheffield United oo ay ku booqatay garoonka Bramall Lane, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Daqiiqadii 33-aad kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 0-1 ka dhigay Alexandre Lacazette, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Daniel Ceballos.
72 daqiiqo Arsenal ayaa dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta waxaana 0-2 ka dhigay dheesha xiddigeeda Gabriel Martinelli.
Daqiiqadii 85-aad kooxda Gunners ayaa hoggaanka sii dheereysatay kaddib markii uu 0-3 ka dhigay weeraryahanka reer France ee Alexandre Lacazette oo caawin ka helay saaxiibkiis Thomas.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku dhamaatay 0-3 ay kaga soo adkaatay Arsenal kooxda Sheffield United oo ay ku booqatay garoonka Bramall Lane, Gunners ayaa ku jirta booska 9-aad ee jadwalka kara sareynta horyaalka Premier League, kaddib markii ay uruursatay 45 dhibcood.
Macallinka Kooxda Arsenal ee Mikel Arteta oo xaqiijiyey in labo ka mid ah xiddigihiisa ay dhaawacmeen kulankii xalay ee Sheffield United